China Pet Imbwa Huru Stool Unganidzo Turu Poop Picker fekitori uye vagadziri | MiaSein
Chigadzirwa zita: Pet Imbwa Huru Stool Unganidzo Turu Poop Picker
Tsananguro:Yemafashoni modelling, yakasimbiswa yezvakatipoteredza kuchengetedza zvinhu, oxidation kuramba, ngura kuramba. Nemubato, inokodzera mutakurwi kutakura
Item zita zita: Pet Zvishandiso & Pet
Kushandisa: kana uchishandisa, kufukidza pamusoro pevhu nebepa, uye wozoshandisa chimbuzi kuibata uye nekuirasa. Kana kushandisa rimwe bhandi remarara rinotengeswa mumusika kuvhara mukati mechimbuzi nekuibata pasi. Zviri nyore, utsanana uye kunetseka mahara. Inokodzera kushandiswa kwemusha uye kufamba.
Zvakanakira: zviri nyore kuti muridzi achenese tsvina yembwa. Inogona kutorwa zviri nyore nekushandisa pepa tauro. Kana pasina gaba remarara, tsvina inogona kuchengetwa mubhokisi kwechinguva, izvo zvisingazopotswe uye zvisina kuravira. Yakachena uye ine hutsanana, uye maoko emuridzi haana hukama netsvina yemhuka. Pepa tauro kana bhegi repurasitiki zvinogona kutsiviwa.
Ruvara: Royal bhuruu, nhema
Chinhu: Gender: Zvese
Saizi （mu cm）: Kureba: 60cm, clip: 13.5 * 12.5 * 10cm, bata upamhi: 12.5cm
Feature: Geza tsvina yemhuka yako
Kushambidza nzira: Sukurudza nemvura uye kuoma, Ndokumbirawo uchenese zvakasiyana. Usageze nezvinhu zvevanhu
Yekuchengetera nzira: Chengetedza munzvimbo inotonhorera uye yakaoma
Stock mhando: Mudura
Ndokumbira utarise: Ichi chigadzirwa chakagadzirwa uye chakagadzirwa chete nekambani yedu. Ichi chigadzirwa hachitsigire maitiro. Ndokumbirawo ukande tsvina yemhuka yechipfuwo muguruva munguva. Usarase marara.Manual measurement error, ndokumbira utarise kuchinhu chaicho.Saka geza uye uchengete zvinoenderana nenzira yekuwachisa uye nzira yekuchengetera.Saka usagogodza chigadzirwa zvakaomarara kuti usakuvadze chigadzirwa. Kana iwe usingagutsikane nechigadzirwa, ndapota nyorera vatengi.
Pashure: Pet Katsi Yakareruka Disc Yakanaka uye Inonakidza Cat Tafura Pet Cat Kitten Cat Adult Cat Zhizha Kutonho Diki Cat Tafura Cat Cat
Zvadaro: Kupeta Kufamba Kunamira neRambi yeVakwegura
Vacheche Vemubhedha Net Cover
Mucheche Mubhedha Mudziviriri
Mucheche Wemubhedha Wekurara
Vacheche Crib Bedding Sets
Inotakurika Mucheche Mubhedha
Inotakurika Yevacheche Mubhedha Kufamba
Mudiki Anotakurika Mucheche Mubhedha
Kufamba Kwevacheche Mubhedha
Pet Hembe Huru Imbwa Jasi Autumn uye Hembe Hembe
Puppy Hembe Dzakashambadzira Brand Corgi Pug bulldog Sm ...
Nyowani Anti Kushungurudzwa Kwemurume Imbwa Physiological Pant ...
Cat Kukwira Chimiro Cat Cat Kukwasva Board Cat Gri ...
Huru Imbwa Hembe Hwepakati Sized Huru Imbwa Dzinodziya ...
Huru Imbwa Hanzu Labrador Pakati Pakati Yakakura Huru Imbwa ...